Sky Sports Oo ogaatay Xiliga uu Drinkwater ku biirayo Kooxda Chelsea
Friday, July 20th, 2018 - 00:13:50
Wednesday August 30, 2017 - 11:04:26 in Wararka by Abdirahman Abduqadir Maankiz
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer England ayaa la fahamsan yahay inuu doonayo inuu u dhaqaaqo Stamford Bridge laakiin kooxda ka dhisan Galbeedka London ayaa ku guuldareysatay in laga aqbalo dalab 25 milyan oo ginni ah.
Foxes ayaan dooneynin inay iibiyaan kubadsameeyahooda,Sky Sports News ayaa ogaatay In xiddigaan uu Wareegi doono Habeenka Ugu dambeeyo Ee suqa kala Iibsiga.
Chelsea ayaa durbadiiba la saxiixatay xiddiga qadka dhexe ee Tiemoue Bakayoko oo ka yimid Monaco xagaagan, laakiin tababaraha Blues Antonio Conte ayaa doonaya Drinkwater inuu ku xoojiyo Khadkiisa dhexe.
Kooxda heysata horyaalka ayaa sidoo kale iibisay Nemanja Matic oo ku biiray Manchester United,Drinkwater ayaa dhawaan saxiixay qandaraas afar sano ah, lakiin waxa uu sidoo kale dib u la midoobi doonaa saaxiibkiisii ​​hore ee Leicester N'Golo Kante hadii uu u dhaqaaqo Stamford Bridge.
Labada nin ayaa is kaga garab ciyaaray Leicester horyaalka Premier League 2015-16.